Malunga nathi - NGOKUPHAKILEYO UKUPHAKISWA KUNYE NOKUPRINTA CO., LTD
Umthombo wakho othembekileyo wokupakisha ubhetyebhetye!
Ukupakishwa okuhlala kuluhlaza kunye nokuprinta (i-EPP) kutyala imali kubunjineli bokupakisha kunye netekhnoloji, kwaye iyazidibanisa kwinkqubo yazo efanelekileyo yezixhobo zemveliso.
Le nkqubo ibandakanya i-7 + 1 9 + 1, 7 + 5 isantya esiphezulu somatshini wokuprinta iiseti ezi-3, umatshini wokulaminetha iiseti ezi-3 (ububanzi be-lamination ukuya kuthi ga kwi-1600mm), iingxowa ezenza umatshini iiseti ezisi-7, umatshini wokusika imodyuli iiseti ezi-2.
Sifaka kwaye sisebenza ngeLebhu, esixhobisa umvavanyi wokuvavanywa, ukuvavanywa komvavanyi, ukuqhaqha umvavanyi, ukutyibilika kwesilingo, ukunyusa amandla kunye nokuvavanya amandla, kwaye, ukunyanzelwa kweoyile yendibano, ukuqinisekisa ukuba zonke iimveliso ziya kugcinwa ngesicelo esikumgangatho ophezulu kwimveliso.
Ngeelayisensi zokuvelisa ukupakishwa okuguqukayo kokutya, zonke izinto ezingavuthiweyo zithengwa kumgangatho ophezulu wombane onolawulo olungqongqo lomgangatho.
I-EPP ihlawula ngakumbi ukhuseleko, ucoceko lweemveliso, kunye nokugcina imfihlo, ngonogada weyure ezingama-24, inkqubo yokujonga umabonakude yesekethe evaliweyo, kunye nealarm auto.
Someleza izibonelelo kwimveliso yococeko kwaye sinikezela ngokuhlolwa komzimba kwabaqeshwa. Iifilimu zenkunkuma ziipesenti eziyi-100 zegranulated ukuthintela ukusetyenziswa gwenxa kwemida kunye nee-engile.
Abasebenzi abakwi-EPP liqela lobungcali eliqhutywa ziziphumo, ezobuchwephesha-nge-savvy, kunye nokujolisa kwinkonzo. Uninzi lwazo lwaluneminyaka yamava ekukhokeleni iifemu zokupakisha eziguqukayo ngaphambi kokujoyina i-EPP. Zingqinwe ukuba zingumthombo obalaseleyo wokukhula ngokukhawuleza kwenkampani ngokuqonda kwabo ngokunzulu kokufakwa kwezicelo zokupakisha kunye nobuchule babo obungapheliyo bezisombululo ezifanelekileyo kwiimfuno zabathengi ezahlukileyo.
Iqhutywa yifilosofi yethu yequmrhu "esemgangathweni bubomi bethu", sinika abathengi bethu ukufikelela kubuchwephesha kunye nezixhobo, iingcali zokupakisha ezinamava, umgangatho ogqwesileyo, ulwakhiwo lwamaxabiso afikelelekayo, kunye nenkonzo yabathengi abaziingcali. I-EPP ibingumboneleli ophambili wezisombululo zokupakisha kwimibutho yamazwe aphesheya kunye neenkampani ezihamba phambili kumacandelo ahlukeneyo, kubandakanya ne-China yezokuLoba yezizwe, I-Shandong ithengisa ityuwa Corp, iqela lezinto zaselwandle laseShanghai, iSethai PET yesondlo Inc kunye nabanye. Ukongeza e-China, iimveliso zethu bezisebenza kwiimarike eMntla Melika, e-EU, e-Oceania, eJapan, eMzantsi Korea, eRashiya, njl.
Nokuba zithini na iimfuno zakho zokupakisha, i-EPP ikulungele ukubonelela ngezisombululo ezingenaxabiso kunye nomgangatho ophezulu kunye nokuthembeka.